I-ID yobuso, ngaba iyakuqinisekisa? | Ndisuka mac
I-ID yobuso, ngaba iyakuqinisekisa?
Nje ukuba i-Keynote igqityiwe, onke amarhe kunye nokucingela sele kucociwe kwaye, ekugqibeleni, siyayazi ukuba ijongeka njani i-Apple iPhone X entsha, kwisikhumbuzo seminyaka eli-10 ye-iPhone yokuqala. Kwinkcazo yeemvakalelo, kunye nemibono emininzi kumdali wenkampani, uSteve Jobs, sikwazile ukubona ukubheja okwenziwa yiApple Vula ifashoni, ukubonwa kobuso.
Ukulibala ngokupheleleyo unyawo kwaye konke oko kwakuthetha kona, Ukubheja iApple kwi-ID ebizwa ngokuba yiFace ID, ukubonwa kobuso okukhuselekileyo, bathi, kuneminwe yangoku.
Idatha yidatha. I-ID yokuChukumisa ine-1 kwimpazamo engama-50.000 XNUMX yabantu kunye nemizamo, ke ukusilela kweminwe yokuvula kukusilela ekude kakhulu ukuba sicinga ukuba sinamathuba amathathu kuphela ngaphambi kokungena kwikhowudi ye-iPhone.
Ngokuchasene noko, ukubonwa kobuso obutsha, i-ID yobuso, ine-1 kwi-1.000.000 ithuba lokungaphumeleli, oko kukuthi, ikhuseleke amaxesha angama-20 kuneTouch ID. Ubalo lubonisa kuphela idatha elungileyo evela kwiflegi entsha yenkampani esekwe eCupertino. Ukhuseleko lwezixhobo luphuculwe ngokubonakalayo.
Nangona kunjalo, le ngxaki ilandelayo ivela: ngalo lonke ixesha sifuna ukuvula i-iPhone yethu, kuya kufuneka siyiphakamise kwaye siyijonge ngqo ebusweni, ukuze sikwazi ukuyivula, okanye ukuyijoyina ukuba isetafileni okanye kwenye indawo esingayifuniyo okanye asikwazi ukuyiphakamisa (ukuba ibiyiphethe, umzekelo).
Kwaye andonwabanga ngakumbi malunga nokuhlala ndisebenzisa ubuso bam ukuvula ifowuni yam. Ewe sinokusebenzisa ikhowudi ebhaliweyo, kodwa sele ixhaphakile ...
Kwakhona, nkqu nakwidemo kaCraig Federigi's Keynote izolo, umzamo wokuqala awuphumelelanga. Oku akuthethi nto kodwa siza kubona ukuba isebenza njani inzwa yekhamera.
Ke ngoko, ndiyabona kolu phuculo ngakumbi into engalunganga kunenzuzo. Lixesha kuphela eliza kuxela ukuba ingaba i-ID yobuso ingcono kune-ID. Ekuboneni kokuqala, ndikufumanisa kunzima ngakumbi kunangaphambili. Kwaye kuwe, ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-ID yobuso, ngaba iyakuqinisekisa?
haha ubona nje indlela amnike ngayo uCraig Federigi ezinye i-lags ezincinci kwintetho sele inika umbono wokuba izakuhamba njani ... kodwa masibone ukuba ihamba njani
Ukuthanda kakhulu ubumfihlo kunye nokubeka zonke iipassword ezingenangqondo kwaye ndiza kuthenga i-tf eyamkela ubuso bam? niiii wentlekisa !!!
kodwa ukuba awufuni, sukuyithenga, awunakuze uzihluphe ngokubhala uxelele umhlaba ukuba uyayichasa le nkqubo… sukuyenza kwaye ngoku… akukho mntu ungapheki tim kuyakunyanzela ukuba uyithenge… nangona ndiyakubheja uza kuyithenga kwaye ukuba awuphendulanga, yintoni ehlazo
Ke ngoku isela okanye nawuphina umntu onomdla kwidatha yakho. Uba ifowuni yakho ebusweni bakho ngelixa ekuphanga kwaye ekulungele ukuvulwa kuvulwe ukuze enze nantoni na ayifunayo ngeenethiwekhi zakho kunye nezinye izinto zakho. hayi andiyithandi lonto.
Ukuba awukhangeli kwiscreen ayizukuvula. Kwakhona, ukuba awuyazi iphasiwedi ye-iCloud, sikule nto indala. Awunakwenza nto ngayo ukuba olo lwazi.
Kuqinisekisiwe ukuba i-iPhone X yongeza isakhelo esimnyama ngaphambili